Dhalada Bixinta Dhalada Dhalada ee Shiinaha oo Cad Cad Amber Barafaysay Warshadda Dhalada Dhalada Boston iyo Warshadda | Maya
Dhalada Saabuunta Dhalada Saabuunta Cad Dhagaxa Dhalada Boston Dhalo
Midabka Dhalada: Amber, Cad, Cagaar, Buluug, Matt Black, Caddaan, La -habeeyey iwm
Qalabka: Bamgare caaga ah, Mashiinka birta ah ee aan birta lahayn, Ku -kicinta Buufinta, Furka Ku -marooji
Habka loo habeeyay: Barafoobay, Daabacaadda Shaashadda, Shaabbadda Dahabka ah, iwm
Geedi socodka qoto dheer
A. daabacaadda shaashadda xariirta
B. midabo buuxa shaabbad kulul
C. calaamadeeyaha dhejiska
D. rinjiga barafoobay iyo buufin
Dhalooyinka wareegsan ee Boston, oo sidoo kale loo yaqaan dhalooyinka Winchester, waxaa ka muuqda saldhig la ballaadhiyay oo habboon. Dhalooyinkaan galaaska ah ee isku dhafan ayaa caadi ahaan loo adeegsadaa daryeelka shaqsiyeed, dawooyinka, warshadaha kiimikada iyo in ka badan xasiloonidooda inta lagu jiro qaybinta.
Bixiyaha gacmaha nadiifiye ee Boston waxaa loo isticmaali karaa qaybiyayaasha bamka buuxiya sida gacmo nadiifiye, shaambo, hagaajiye, dhaqidda jirka, kareemka jirka iyo saabuunta. Isticmaal dhalada qaybiyaha saabuunta dhalada ee Boston si ay kaaga caawiso abaabulka qubayska musqusha iyo jikada, abuurista jawi nadiif ah oo raaxo leh.
Bixiyaha saabuunta ayaa leh naqshad qurxoon oo leh jir muraayad la sameeyay iyo madaxa bamka chrome-plated, kaas oo ku habboon saabuunta ama kareemka aad jeceshahay. Muraayadda midabka bunni ee Amber waxay bixisaa ilaalin ultraviolet, gaar ahaan muhiim u ah udugga, saliidaha lagama maarmaanka ah & daaweynta dhirta si loo ilaaliyo saamaynta faa'idada leh.
Nadiifiyaha gacmaha, ka dib markii uu la kulmay dhowr cudur oo faafa oo waaweyn, suuqa ayaa si weyn u horumaray. Dhammaanteen waan ognahay in heerka gelitaanka suuqa ee gacmo nadiifiyuhu uu sii kordhayay sannadihii la soo dhaafay. Bilowgii ugu horreeyey ee gacmo nadiifiye si loo soo jiito dareenka dadka wuxuu ka yimid SARS sannadkii 2003. Caannimada gacmo nadiifiyuhu waxay sidoo kale dhalisay baahida suuqa ee baakadaha dhalada gacmaha lagu nadiifiyo. 10kii sano ee la soo dhaafay, baakadaha dhalooyinka dareeraha ah ee dharka lagu dhaqo ayaa asal ahaan ilaaliyey qaabka bamka cadaadiska, qaabkuna wax badan iskama beddelin. Waxaan rajeyneynaa in qeybiyaha gacmo -nadiifiyuhu uu ku dari karo nasashada khibradaada.
Waxaa loo sameeyay alaab dareere iyo xumbo leh, iyo sidoo kale looshan iyo saabuun, dhalooyinka wareegsan ee amber boston oo leh bambooyin ayaa siiya qadar alaab ah oo leh riixid kasta. Dhalooyinka bamgareynta ayaa ah beddel weyn oo ku habboon baakadaha caagga ah ee caadiga ah maadaama ay yihiin kuwo dib loo isticmaali karo waxayna siiyaan ilaalin wanaagsan badeecadaada. Dhammaan qiimayaasha waxaa ka mid ah bamka.
Hadda, dad aad u tiro badan ayaa bilaabaya inay ogaadaan in shaqsiyeynta ay tahay isbeddelka mustaqbalka, iyo qaabka baakadaha aan isbeddelin ee dhalooyinka gacmaha lagu nadiifiyo ayaa hubaal muujin doona isbeddello cusub mustaqbalka. Waxaa jiri doona isbeddello kala duwan xagga awoodda iyo muuqaalka labadaba. Baakadaha dhalada dareeraha ah ee la habeeyay oo la habeeyay oo la habeeyay ayaa aad u dabacsan waxayna noqon doontaa mid caan ah.
1) Ku habboon deegaanno kala duwan, sida deggenaansho, ganacsi, kaamam, xafiis, dukaan, makhaayad iwm.
2) Si sahlan loo isticmaalo oo loo nadiifiyo
3) Agab tayo sare leh
4) Si qurux badan loo baakadeeyay oo ku habboon hadiyadaha
5) Is -habeynta waa la aqbali karaa, oo iska leh macluumaadkaaga gaarka ah
6) Muraayadda bilaashka ah ee macdanta leh iyo walxaha bamka gacanta ee bilaashka ah ee BPA ayaa ka dhigaya bay'ad saaxiibtinimo leh. Bixiyaha dhalada waa mid dib loo isticmaali karo oo dib loo warshadeyn karo taasoo keentay eber qashin ah.
Midabyo badan iyo habaynta qaababka
Madaxa bamka kala duwan iyo qaababka daboolka dhalada
Walxo macaan oo dhumuc weyn leh
Hore: Dhalooyinka Reed Diffuser Dhalada Jumlada Cad ee Opal Glass Dhalo Diffuser Oo Ul leh
Xiga: Weelasha Muraayadaha Qurxinta ah Dhalada Kareemka Dhalada Kareemka leh Daboolka Bamboo
qaybiyaha saabuunta dhalada
dhalada galaaska boston
dhalada bamka xumbo
galaas xumbo qaybiyaha
dhalada saabuunta dhalada
dhalada saabuunta dareeraha ah
dhalada qaybiyaha saabuunta
Dhalooyinka Cadarrada Dhalooyinka Jumlada leh Buufin Appl ...
8 oz Dhalooyinka Dhinac Toosan ee Dhalooyinka Amber Glass Cont ...
Dhalooyinka Shumaca Weelasha Shumaca Maraakiibta Jumlada leh ...
Cosmetic Glass Weelasha Cream Jar Lotion Dhalo ...
Dhalooyinka Reed Diffuser Jumlada Cad ee Opal Glas ...
Dhalo saabuun qaybiyaha Dhalo cad Amber barafoobay ...